United Airlines waxay bixisaa koodhadhka PayPal QR oo ah ikhtiyaar lacag bixin cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » United Airlines waxay bixisaa koodhadhka PayPal QR oo ah ikhtiyaar lacag bixin cusub
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
United Airlines waxay noqonaysaa diyaaraddii ugu horreysay oo soo saarta koodhadhka PayPal QR oo ah ikhtiyaarka lacag-bixinta-leh ama aan lahayn Wi-Fi.
Bixinta lacag-la’aan ee ugu dambeysay ee taabashada-la’aanta ah ayaa u oggolaanaysa macaamiisha inay iibsadaan cunno fudud, cabbitaanno, iyo waxyaalo kale oo wax-iibsi ah inta ay saaran yihiin iyagoo iska baaraya lambar QR ah.
Rakaabka United Airlines waxay isticmaali karaan ikhtiyaarka lacag bixinta koodhka PayPal QR cusub-leh ama aan lahayn Wi-Fi.
Shuraakadu waxay ka bilaabmaysaa Chicago bisha soo socota waxayna ku fidin doontaa nidaamka oo dhan ka hor dhammaadka sanadka.
United iyo PayPal ayaa maanta shaaciyey hab cusub oo lagu sameeyo iibsashada macluumaadka aan taabashada lahayn, xitaa meelaha aan lahayn Wi-Fi. Laga bilaabo bisha soo socota, macaamiisha United ee duullimaadyada la xushay waxay si fudud u tusi karaan adeegaha duulimaadka QR Code PayPal ee barnaamijka PayPal waxayna u adeegsan karaan inay ku iibsadaan cunno fudud, cabitaanno iyo waxyaalo kale oo wax -u -iibsi ah inta ay saaran yihiin.
United Waxay Noqotaa Diyaaraddii Ugu Horreysay ee Soo Bandhigta Xeerarka QR ee PayPal sida Ikhtiyaarka Lacag -bixinta
United Airlines waa diyaaradii ugu horeysay ee bixisa PayPaLambarada QR, iyo iskaashigani waa qayb ka mid ah adeegsiga fudud ee United, oo ah hormuudka warshadaha ee qalabka lacag bixinta ee aan lala xiriirin. United waxay ahayd diyaaraddii ugu horraysay ee siisa macaamiisha ku jira kaabayaasha dhaqaalaha ikhtiyaarka ah inay hore u dalbadaan cunto fudud iyo cabbitaannada app-ka iyo mareegaha diyaaradda, waxayna sidoo kale siisaa macaamiisha awood ay si fudud ugu kaydiso macluumaadka lacag-bixinta boorsada dhijitaalka ah.
PayPal Xeerarka QR waxaa loo adeegsan karaa duulimaadyada la xushay ee ka duulaya Madaarka Caalamiga ah ee Chicago O 'Hare bisha Nofembar iyo ka hor dhammaadka sannadka, waxay ku fidin doonaan dhammaan duulimaadyada dhammaan shabakadda oo dhan oo laga heli karo lacag -la'aan xiriir la leh.
Toby Enqvist, oo ah sarkaalka macmiilka ee shirkadda United Airlines. “PayPal waa lamaane aad u wanaagsan teknolojiyaduna waxay siisaa macaamiisheenna hab kale oo sahlan oo wax lagu iibsado, xitaa marka aysan ku jirin internetka. Waxaan filaynaa inaan mustaqbalka u soo bandhigno ikhtiyaarro cusub oo cusub oo hal -abuurnimo leh annaga oo kaashaneyna PayPal. ”
Haddii aadan hore u haysan, soo dejiso barnaamijka PayPal oo dejiso habka lacag -bixinta ee aad doorbidayso lacagaha QR code, ka hor intaadan ka bixin iridda.
Si aad wax u iibsato, u riix badhanka 'Ku bixi koodhadhka QR'.
Kadib guji badhanka 'Iibsashada Diyaaradda'.
Tus lambarka QR -ka shaqaalaha diyaaradda si uu u baaro.
Raadi rasiidh xaqiijin iimayl ah markaad soo degayso.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan iskaashi la samayno United si aan u soo bandhigno shaqadeena cusub ee QR -ka ee qadka tooska ah, annagoo ku darayna siyaabo badan oo macaamiishu ay ugu hubin karaan PayPal meelo badan, gaar ahaan aagagga isku xirnaanta ama hoose," ayuu yiri Frank Keller, Madaxweyne Ku -xigeenka Sare ee Xalalka Qeybaha Ganacsiga iyo Ganacsiga Dijital ah ee PayPal. Keenista koodhadhka QR-ga ee PayPal waxay xoojineysaa ballanqaadkeenna ah inaan siino macaamiisha xulasho waxayna siineysaa heer cusub oo raaxo-la'aan taabasho leh macaamiisha markay wax iibsanayso duullimaadka dhexdiisa, dhexdeeda barnaamijka PayPal ee ay yaqaaniin kuna kalsoon yihiin.
Oktoobar 27, 2021 at 07: 27
Waxaan rajeyneynaa inaan soo bandhigno xitaa fursado cusub oo cusub oo macaamiisheena ah. Shirkaddu waxay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee siisay rakaabka dhaqaalaha ikhtiyaarka ah inay horay uga dalbadaan cunto fudud iyo cabitaan iyada oo loo marayo United app iyo website.